Madaxweynaha Puntland ‘Deni‘ oo kulan muhiim ah la qaatay Wasiir ka tirsan dowladda Itoobiya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Puntland ‘Deni‘ oo kulan muhiim ah la qaatay Wasiir ka tirsan...
Madaxweynaha Puntland ‘Deni‘ oo kulan muhiim ah la qaatay Wasiir ka tirsan dowladda Itoobiya
Addis Ababa (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa caasimadda dalka Itoobiya kulan kula qaatay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Itoobiya Axmed Shide.
Soo dhoweyn iyo is-xog waraysi kadib, Madaxweyne Deni iyo Wasiir Axmed Shide ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dhinac ee arrimaha ganacsiga, amniga, horumarka iyo xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa xusay in Puntland soo dhaweynayso iskaashiga horumarineed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan Puntland. Waxaana uu Madaxweynuhu u rajeeyey shacabka iyo dowladda Itoobiya Amni iyo horumar.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda dowladda Itoobiya Axmed Shide ayaa dhankiisa sheegay inuu ku faraxsan yahay kulanka isaga iyo Madaxweynaha, waxaana uu tilmaamay in ay dhankooda diyaar u yihiin dardargelinta iskaashiga ganacsi, amni, horumar iyo deris wanaag ee ka dhexeeya labada dhinac.
Kulanka Madaxweynaha Puntland
wasiirka maaliyadda ee dalka Itoobiya